Autumn: izici, imikhosi, izitshalo kanye curiosities | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El ukuwa Ngenye yezinkathi zonyaka enikeza abantu imizwa eminingi kunentaba-mlilo, ngoba kunezinguquko eziningi kwezemvelo nakwezemvelo. Namuhla sizokhuluma ngokuthi yiziphi izici eziyinhloko zekwindla, inkathi yonyaka ezayo kithi manje. Kugqame ukuba nesikhathi esifushane sezinsuku, ukuwa okujwayelekile kwamaqabunga ezihlahleni ezinamakhaza, ukubuya kwamakhaza kanye nokwehla kwamazinga okushisa.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yiziphi izici eziyinhloko zekwindla.
1 Ekwindla engxenyeni ngayinye yezwe
2 Izici ze-Autumn
2.1 Amahora wokukhanya nokushisa
2.2 Ukuwa kwamaqabunga nemibala ebomvu
3 Izitshalo nemikhosi ekwindla
Ekwindla engxenyeni ngayinye yezwe
Ukwindla kungenye yezinkathi ezine zonyaka futhi kwenzeka phakathi kwehlobo nobusika. Kunjengokungathi bekuyizinyanga ezimbalwa zenguquko lapho isikhathi sezinsuku sincishisiwe, amazinga okushisa ehla, ezinye izindlela zokuziphatha zezidalwa ziyaguqulwa, njll. Uma besingachaza ukwindla ngendlela emfushane, singakusho lokho yisikhathi soshintsho. Lezi zinguquko kwezemvelo zivusa imizwa ehlukahlukene kubantu njengokuzwa kokuhamba kwesikhathi kanye nesifiso. Iqiniso lokuthi nathi sivela esikhathini lapho kuvame ukuba khona amaholide, uhambo, izibopho ezimbalwa, njll. Kungasisiza sizizwe sengathi sibuyela ezinyangeni zesibopho esikhulu kakhulu.
Ngokufika konyaka omusha wesikole nezethembiso zokufunda nsuku zonke, ukuzivocavoca umzimba noma ukuqala umsebenzi omusha nakho kuvusa imizwa emikhulu. ENyakatho Nenkabazwe isikhathi sokwindla siqala ekupheleni kukaSepthemba size siphele ekupheleni kukaDisemba., kuvumela ubusika budlule ngokungena kukaKhisimusi. Isizini iqala nge-equinox yasekwindla futhi iphela nge- solstice ebusika.
Ngakolunye uhlangothi, uma siya eningizimu yezwe, siyabona ukuthi ukuwa kwenzeka kusukela ngesonto lokugcina likaMashi kuya esontweni lokugcina likaJuni. Kwenye ingxenye yomhlaba, uma siya eMpumalanga ye-Asia, le sizini yonyaka iqala ngeviki lesibili lika-Agasti futhi liphela ngesonto lokuqala likaNovemba. Ngokuya ngendawo esikuyo, kunamasiko nemikhosi ethile ebungazwa ngalesi sigaba.
Yisikhathi lapho amazinga okushisa ehla futhi anesikhathi esifushane uma kuqhathaniswa nezinye izinkathi zonyaka.
Sizohlaziya ukuthi yiziphi izici eziyinhloko zekwindla nokuthi zibaluleke kangakanani.
Amahora wokukhanya nokushisa
Uma sihlaziya usuku lokuqala lwekwindla siyazi ukuthi luqala ku-equinox yalo. I-equinox yasekwindla ibonakala ikakhulukazi ngokuba nesikhathi esilinganayo samahora emini njengasebusuku. Singasho ukuthi kukhona amahora ayi-12 okukhanya namahora ayi-12 obumnyama. Lokhu kwenzeka ngenxa yelanga eliqondaniswe maphakathi neplanethi yoMhlaba. Kusukela ngalolu suku lapho i-equinox iphela khona, kuyisikhathi lapho izinsuku zifinyezwa nobusuku bude. Lokho wukuthi, kukhona amahora amaningi futhi amnyama wobumnyama namahora ambalwa okukhanya.
Ngenxa yalokhu kanye nokushintsha kwezinga lokuthambekela kwemisebe yelanga ebusweni bomhlaba, amazinga okushisa ancipha kakhulu. Ntambama yasekwindla imvamisa idume kakhulu njengoba ifika ihambisana nezinye zezimali ezipholile. Ukujwayela ukuza kusuka ehlobo lapho kuyisimo sokushisa esimnandi kakhulu nasebusuku, sekuvele kupholile ekwindla.
Ukuwa kwamaqabunga nemibala ebomvu
Kungenye yezimpawu ezihlobisa kakhulu lesi sikhathi sonyaka. Izihlahla ezinqabayo ziyancipha ngokuncipha kwe-chlorophyll kuze kube yilapho iqala ukushintsha ibe phuzi futhi ibe nsundu. Lawa maqabunga aqala ukuwa futhi amboze unyawo lwezihlahla ukuze abe amandla azosebenzisa izimpande ukuzinakekela ezinyangeni zasebusika. Lawa maqabunga awela phansi abe yilokho okwaziwa ngokuthi udoti futhi kwehliswe ukwakheka kwezinto eziphilayo ezisebenza njengezakhamzimba.
Siyazi ukuthi ngesikhathi sasebusika kunezinga eliphansi lezakhamzimba, ngakho-ke isihlahla sizodinga zonke izakhamzimba esingazithola. Ngokuya ngemibala, sibona ukuthi iphalethi yombala enikezwa ukwindla icacise kangakanani. Kunemibala esukela ko-ocher, ophuzi, obomvu, onsundu nonsomi. Le nhlanganisela yemibala ikwazi ukuhlangana namathafa engxenye enkulu yomhlaba. Futhi ukuthi amaqabunga ezihlahla aqala ukuba nemithunzi phakathi kokuphuzi no-orenji ngombala wawo oyingqayizivele.
Izitshalo nemikhosi ekwindla
Ngalesi sikhathi sonyaka sinenkathi yemvelo yepomegranati kanye namagilebhisi. Futhi yisikhathi esihle kakhulu sezinye izithelo ezinjengewolintshi, uyabona, ama-apula, ama-tangerine, ukwatapheya, izithelo zomvini kanye namantongomane athile. Uma siya ensimini yemifino, ekwindla kukhuliswa ama-artichokes amaningi, ukholifulawa, isikwashi, i-zucchini, isitshalo seqanda kanye neklabishi. Zonke lezi zilimo zitholakala cishe unyaka wonke, kepha ngokwemvelo ngalesi sikhathi lapho zikhula kahle kakhulu. Uma sikhuluma ngendlela engokwemvelo, sisho ukungasebenzisi noma yiluphi uhlobo lomanyolo noma izimo ezinhle zemvelo ezifana nezindawo zokugcina izithombo.
Esinye sezilimo esidume kakhulu ngalesi sikhathi sonyaka ummbila nobhekilanga. Uma siya esigabeni semikhosi siyabona ukuthi yisikhathi esigujwa ezinyangeni ezahlukene zonyaka ngokusho kwendawo leyo. Isibonelo, elinye lamaholide okwaziwa kakhulu okwamaShayina agubha uMkhosi Wenyanga. Kulomcimbi babonga isivuno esiyimpumelelo abasitholile ehlobo. Kukhona nolunye usuku ngokubhekisele ekuvuneni futhi kungukubonga. Kungumkhosi owenzeka ngoMeyi wokugcina kaNovemba futhi okuhle konyaka ngamunye kuyaziswa, kuhambisane nedili lapho i-turkey eyayigcwele khona ingumlingisi ophambili.
Omunye wemigubho osakazeka kakhulu emhlabeni wonke futhi owenzeka ekwindla yiHalloween. Kwenzeka ngo-Okthoba 31 futhi kuhlotshaniswa nesiko lamaCelt. Kuleli holide, umuntu ugqoka futhi izingane zihamba zizungeza izindlu zicela amaswidi futhi zenza amahlaya.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nezimpawu eziyinhloko zekwindla.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » I-Otoño